raha novinaniana ho afaka hiasa afaka 2 taona. Tsy nahitana fivoarana ny mikasika ny soniam-pifanaraha-miasa mikasika ny fahazoana izany sy ny fifanarahana momba ny fanjifana herinaratra mikasika izany, raha ny tatitra voaray avy amin’ny vovonan’ny seraseran’ny kaompaniam-pirenena mikasika ity famatsiana angovo na « hydroélectricité » ao Volobe (CGHV) ity. Efa vonona hatramin’ny taona 2020 nefa ny tetikasa momba ny fifanarahana amin’ny fandraisana izany sy ny antsoina hoe PPA na « Power purchase agreement ». Ny areti-mandripaka Covid 19 rahateo no isan’ny nampitarazoka ny fanapahan-kevitra, raha ny fanazavana. Tsiahivina fa ity ivon-toerana izay manana tanjaka 120 mégawatts ity dia notombanana hamokatra ho an’ny faritra Atsinanana no sady hamatsy ny vokany amin’ireo tambazotra mifandray amin’Antananarivo na RIA.
120 MW ny herinaratra hovokarina ao Volobe. 25m ny haavon'ny toho-drano ary manodidina ny 660 Ha ny velaran'ny farihy.Asa maherin'ny 500 no hoforonina.2 tapitrisa ny mponina ho voakasika mivantana ary tokantrano maherin'ny 360.000 no vinaina hisitraka angovo.